निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासको अन्त्य गरौं
झन्डै दश महिनाअघि संविधानसभाको विघटन गरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति मङ्सिर ७ गते तोकिएको थियो । तर दलीय स्वार्थको कारण राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछि अनेकौं राजनीतिक रसाकसीबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्तविपरीत न्यायपालिकाको प्रमुखलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । जुन बहुदलीय राज्य व्यवस्थाको विपरीत थियो । तर राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि गरिएको सो निर्णय भने स्वागतयोग्य छ । प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएपछि यी दलहरू चुनावका लागि अग्रसर देखिएका छन् । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको लागि निर्वाचन मेरुदण्ड हो र वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नरहेकोले पनि चार दलको निर्णय स्वागतयोग्य छ । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई अमेरिका, भारत, युरोपेली सङ्घ, जापान जस्ता मित्रराष्ट्रहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । तर एमाओवादीबाट छुट्टिएको मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा–माओवादी एवं केही साना दलहरू चुनाव बिथोल्ने प्रयासमा लागेका छन् । जुन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको लागि अभिशाप हो । नेकपा–म
आशावादी सोच: उपलब्धि र उन्नतिको स्रोत
- अनन्तकुमार लाल दास अनुभवी र दूरदर्शी मानिस छिट्टै निराश हुँदैनन् । उनीहरू सधैं दु:खसँग सङ्घर्ष गर्न तैयार भई बस्छन् । उनीहरूले जहिले पनि आफ्नो सम्पर्कमा आउने दु:खी मानिसहरूलाई दु:खी हुने कारण सोधी हौसला प्रदान गर्छन् । जीवन कुनै दुर्घटना होइन । यो एक सङ्घर्ष हो । यस सङ्घर्षले हामीलाई अझ सशक्त ढ·ले जीवन निर्वाह गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ । जुनबेला तपाईं हिंड्दा हिंड्दै लड्नुभएको थियो र पुन: एकछिनमैं उभेर हिंड्न थाल्नुभएको थियो, त्यसबेला के तपाईं निराश हुनुभएको थियो ? पक्कै हुनु भएको थिएन किनभने त्यसबेला तपाईंलाई दु:ख र सुखबारे थाहा नै थिएन । जसरी बादलको स्वभाव धर्तीलाई पानी प्रदान गर्नु हो, सूर्यको स्वभाव गर्मी र ऊर्जा प्रदान गर्नु हो, चन्द्रमाको स्वभाव शीतलता प्रदान गर्नु हो, त्यस्तै मानिसको वास्तविक स्वभाव सधैं प्रसन्न भई बस्नु हो । जुनबेला हामी निराश हुन्छौं, त्यसबेला हामी आफ्नो स्वभावविपरीत आचरण गरिराखेका हुन्छौं । त्यसबेला हामी तनावमा हुन्छौं । निराशा हाम्रो स्वभाव होइन । हामी कुनै कारणले निराश भएपनि त्यसको नराम्रो प्रभाव हामीमाथि पर्छ तर अन्त्यमा हामी प्रसन्न नै हुन्छौं ।
चुनौती झन् बढेको छ
आशाको किरण देखिनै लागेको बेला हुस्सु उठ्न थालेको छ । मुलुक लामो अन्योलपछि पुन: संविधानसभा निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएको बेला चुनावी कार्यक्रम नै बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलाप हुन थालेका छन् । एमाओवादीबाट विद्रोह गरेर अलग भएको नेकपा–माओवादी चुनाव बिथोल्ने औपचारिक घोषणामा उत्रने तरखरमा छ । वर्तमान चुनावी सरकार गठन प्रक्रिया र मुख्य चार राजनीतिक शक्तिको सत्ता घेराबन्दी विरुद्ध असन्तुष्ट उक्त पार्टीले सबभन्दा पहिले चुनावमा सहभागी नहुने घोषणा गर्‍यो । त्यसको केही दिनपछि मतदाता नामावली सड्ढलन टोलीको उपकरण खोस्न थाल्यो । उपकरण जफ्त अभियान हाल नेकपा–माओवादीले पार्टी निर्णय भनी घोषणा गरेको छ । नागरिकता वितरण र पुन: मतदाता नामावली सड्ढलन चार दलीय सहमति अनुसार चुनावी सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेकपा–माओवादीको अभियान सरकारको पहिलो कदम नै असफल पार्न केन्द्रित देखिएको छ । पार्टी विभाजनकै बेला वैद्य नेतृत्वको माओवादीले जनविद्रोहको आधार तयार गर्ने र शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सफल भए आन्दोलन तथा विद्रोहमा सहभागी दल तथा शक्तिहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने, अनि मात्र जनसंविधान निर्माण प्रक्र
करोडौंको सम्पत्ति भएको राधाकृष्ण मठसँग टुकी बाल्न पनि रकम छैन– महन्थ बैरागी
प्रस, वीरगंज, १७ चैत/ सुरजाहा गाविसमा रहेको राधाकृष्ण मठका पुजारी महन्थ सुरेन्द्रदास बैरागीले मठ प्रा·णमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मठको नाउँमा रहेको करोडौं मूल्यबराबरको सम्पत्तिको हिनामिना भइरहेको आरोप लगाएका छन् । मठको बिघौ जमीनको बाली मठ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनानाथ साहले बर्सेनि अनाधिकृतरूपमा उपभोग गरिरहेका मठका पुजारी बैरागीले आरोप लगाएका छन् । मठको नाममा रहेको ६४ बिघा जमीनमध्ये २६ बिघा जमीन मठवरिपरिको गाविसहरूमा तथा बाँकी जमीन विभिन्न गाविसहरूमा छन् । मठवरिपरिका गाविसहरूमा रहेको २० बिघा जमीन तथा मठनजिकैको ६ बिघा गरी २६ बिघा जमीनमा आपैंm बाली लगाइ खाने गरेको तथा मठको नाममा रहेको पोखरी ठेक्का लगाएबापत आएको रकम पनि अध्यक्ष साहले हिनामिना गरिरहेको आरोप पत्रकार सम्मेलनमा महन्थले लगाएका थिए । गुठी संस्थानले मठको व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको मन्दिरनजिकैको ६ बिघा जमीन मठको जिम्मा दिएकोमा सोमा लगाइएको बालीबाट हुने आर्जनले विगतमा मठको व्यवस्थापन हुने गरेको थियो । तर दिनानाथ साह मठ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएदेखि नै सोमा लगाइएको बालीबाट हुने आर्जन पनि अध्यक्
पश्चिमी हावाले किसान एवं व्यापारी चिन्तित
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १७ चैत/ तीन दिनयतादेखि चल्न थालेको पश्चिमी हावाको कारण गाउँमा किसान तथा बजारमा व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन् । बिहान करिब १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चल्ने पश्चिमी हावाले हरियो गहुँको बालालाई सुकाइदिंदा उत्पादकत्व कम हुने भएकोले किसानहरू चिन्तित भएका पर्सा, भवानीपुर–९ निवासी किसान किशोरी साहले बताए । कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत रामतेज चौधरीले बिहान पूर्वी र दिउँसो पश्चिमी हावा चल्दा गहुँको दाना राम्ररी पाकी ठूलो हुने बताए । तर, अहिले पश्चिमी हावा मात्र चल्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आउने उनले बताए । पुसपश्चात् रोपिएको गहुँको उत्पादकत्व पश्चिमी हावाको कारण १० प्रतिशतले कम हुनसक्ने वप्रअ चौधरीको भनाइ छ । त्यस्तै, पश्चिमी हावासँगै धूलो उड्दा बजारमा तरकारी बिक्रेतादेखि कपडा पसलेहरू समस्यामा परेका छन् । धूलो तरकारी र फलफूलमा टासिएर बिक्रीमा कमी आएको तरकारी तथा फलफूल बिक्रेताहरू बताउँछन् । यसैगरी धूलोको कारण कपडाहरू पुरानो देखिने भएकोले बिक्री गर्न अप्ठ्यारो भएको परवानीपुरस्थित एक कपडा पसलेले बताए । “दुई दिनदेखि फलफूल बिक्री ग
फूटबलमा भेन्ट्रास सिटी क्लब विजयी
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १७ चैत/ पर्साको बिरुवागुठी–१ झाबराहामा शुक्रवारदेखि सञ्चालित प्रथम बेलबहादुर नकआउट फूटबल प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिनको खेलमा भेन्ट्रास सिटी क्लब वीरगंजले आयोजक मेरीगोल्ड युवा क्लब झाबराहालाई ३–१ गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ । भेन्ट्रासका नवीन चौधरी, कृष्ण शाक्य र विशाल श्रेष्ठले १/१ गोल गरेका थिए भने मेरीगोल्डतर्फबाट १ मात्र सान्त्वना गोल ज· लामाले गरेका थिए ।
इस्टर सन्डे: यीशुको पुनरुत्थान
परिचय: इस्टर सन्डे पासकल ट्रिडम अर्थात् पवित्र त्रिदिवसको अन्तिम दिन अर्थात् आइतवारलाई भनिन्छ । यसैदिन यीशुको पुनरुत्थान भएको थियो । बाइबल धर्मशास्त्रको नयाँ नियममा चारवटै सुसमाचारका पुस्तकहरूमा यसको वर्णन गरिएको छ । यीशुले सेवाको क्रममा पटकपटक आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानबारे शिष्यहरूसँग कुराकानी गरिरहनुहुन्थ्यो । उहाँ कसरी जेरुसलेममा जानुपर्छ र धर्मगुरु र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भनी उहाँले त्यस बेलादेखि आफ्ना शिष्यहरूलाई बताउन थाल्नुभयो । (मत्ती १६:२१) यस्तै कुराहरू मर्कुस र लुका रचित सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पनि उल्लेख गरिएका छन् । यीशुको मृत्यु र त्यसको तेस्रो दिन भएको पुनरुत्थान पूर्वनियोजित र परमेश्वरको योजनाअनुसार नै थियो । परमेश्वरले ठहराउनुभएको निश्चित योजना र पूर्वज्ञानअनुसार पक्राउ पर्नुभएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूका हातद्वारा तपाईंहरूले क्रूसमा टाँगेर मार्नुभयो । उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो । किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो । (प्ररित २:२३, २४) य
अतीत र वर्तमानको फगुवा
- उमाशङ्कर द्विवेदी यसवर्षको होली, जसलाई भोजपुरी भाषामा ‘फगुवा’ भनिन्छ, बितेको चैत १४ गते हर्षोल्लासका साथ मनाएर सम्पन्न भयो । होलाष्टकको दिनदेखि यसको सुरुआत भएर फागुन पूर्णिमाको दिन होलिका दहन गरी चैत कृष्णपक्ष एकम्को दिन बिहान मालपुवा, र·, अबीर कुलदेवतालाई अर्पण गर्नुका साथै प्रसादको रूपमा मालपुवा र अन्य मिठाइले मुख जुठो गरी ठूला–साना, स·ी–साथीसित परस्परमा र·, अबीर खेलेर ढोल, डम्फू, झाल–मजीरा जस्ता वाद्यहरूको लोकधुनमा होलीको गीत गाएर, नाचेर एकअर्काबीच शुभकामनाको आदानप्रदान गरेर होली पर्व मनाइने परम्परा छ । पुराना दिनहरूमा फगुवा र·ोत्सवको रूपमा समाजका साना ठूला जम्मै वर्गका बीचमा हर्षोल्लास, आपसी भाइचारा र सौहार्दताका साथ मनाइन्थ्यो । दिनको मध्याह्नदेखि फगुवाका गीत गाउनेहरूको मण्डली पारम्परिक बाजाका साथ प्रत्येक गृहस्थको घरद्वारमा गई सुरतालका साथ फगुवा गीत गाउने गर्थे । केही बेरपछि घरमुलीले मण्डलीमा सामेल प्रत्येक सदस्यहरूलाई र·, अबीर लगाएर मसाला (बदाम, छोहडा, नरिवल, किसमिस, सुपारी, सुकमेल) दिएपछि मण्डलीको बिदाइ हुन्थ्यो । बिदाइ हुनेबेलामा मण्डलीले आशीष दिंदै बाजा बजाउँदै गाउँदथे– स
धर्तीमा मात्र होइन, मनमा पनि रोपौं राम्रा विचारहरूको बीउ
राम्रो बाली प्राप्त गर्नको लागि बीउ रोप्नेदेखि लिएर बाली काटुन्जेलसम्म किसानले कठिन परिश्रम गर्न जरुरी छ, तर बाली फलिसकेपछि एक किसानले सबैभन्दा पहिले जुन काम गर्दछ, त्यो हो बालीबाट सर्वोत्तम बीउहरूको छनोट गर्नु र आगामी वर्ष रोप्नको लागि त्यसलाई सुरक्षित भण्डारण गर्नु । एक किसानले गरे जस्तै हामीले पनि आफ्नो मनरूपी भण्डारमा केवल सर्वोत्तम विचारहरूलाई मात्र भण्डारण गर्नुपर्दछ । जसरी उत्तम बीउबाट उत्तम बाली प्राप्त हुन्छ, त्यसै प्रकार सकारात्मक सोचरूपी बीउ नै उचित अवसर पाएर व्यक्ति तथा समाजको लागि उत्तम सृजन गर्नमा सक्षम हुन्छ । मनुष्यको मनमा हर क्षण असङ्ख्य विचारहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्, जसमा केही विचारहरू सकारात्मक वा उपयोगी हुन्छन् भने केही विचारहरू नकारात्मक वा अनुपयोगीस तथापि धेरैजसो विचार निरर्थक र नकारात्मक नै हुन्छन् र यदि यी सबै विचारहरू प्रभावी भयो भने हाम्रो जीवन नर्क बन्दछ, त्यसैले विचारहरूको चयनमा पनि हामी सदा सचेत रहन जरुरी छ । हामीले सक्दो प्रयास गरेर सकारात्मक तथा उपयोगी विचारहरू चयन गरेर आफ्नो मनलाई दिनुपर्दछ । व्यक्तिको विचार अथवा उसको सोच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
नेपाल पत्रकार महासङ्घको ५८ औं स्थापना दिवसमा प्रभातफेरी
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ नेपाल पत्रकार महासङ्घको ५८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज वीरगंजमा प्रभातफेरीको आयोजना गरियो । वीरगंजको घण्टाघरबाट शुरू भएको प्रभातफेरी मुख्यसडकको माईस्थान, आदर्शनगर, अलखियामठ हुँदै पुन: घण्टाघरमा आई कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यमाञ्चल संयोजक महेश दासले लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकोले संविधानसभाको निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरे । उनले निर्वाचनसँगै पत्रकारमाथि सुरक्षाको जोखिम बढ्ने हुँदा सोतर्फ सचेत रहन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए । राजनीतिक दलले आफूअनुकूलको समाचार प्रकाशन/प्रसारण नहुँदा सञ्चारकर्मीहरूलाई असुरक्षित पार्ने गरेको विगतका अनुभव सुनाउँदै उनले सोतर्फ संवेदनशील हुन राज्यलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष केसी लामिछानेले लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक भएको चर्चा गरे । उनले पत्रकारहरूको हकहितका लागि एकता आवश्यक भएको कुरामा जोड दिए । कोणसभाको सञ्चालन सचिव युवराज खड्काले गरेका थिए ।
गैरकानुनी हतियारका कारण शान्ति स्थापनामा कठिनाइ– प्रजिअ ज्ञवाली
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ नागरिक सुरक्षा र संविधानसभाको निर्वाचन सन्दर्भमा साना हतियारको प्रयोग र युवाहरूको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया आज वीरगंजमा सम्पन्न भयो । गैरकानुनी हतियारका कारण समाजमा शान्ति स्थापना गर्न कठिनाइ भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेनीमाधव ज्ञवालीले बताए । उनले राज्यले अवैध हातहतियार ओसारपसारमा संलग्न जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाई गर्ने बताउँदै अहिलेको अवस्थामा सो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको बताए । संविधानसभाको चुनाव हुने निश्चित भएकोले धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन जिल्लाका सबै युवाशक्तिहरूलाई एकीकृत भई अगाडि बढ्न पनि उनले सुझाएका थिए । राज्यले हतियार राख्न इजाजत दिएका व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तादेखि चुनावको परिणाम नआएसम्म हतियार लिई हिंड्डुल गरेमा दोषी ठहर गर्दै कानुनबमोजिम कारबाई गर्ने राज्यले व्यवस्था गरेको बताए । खुला सिमानाका कारण गैरकानुनी हातहतियारको बिगबिग बढेकोले सुरक्षा निकायलाई नियन्त्रण गर्न अहिले चुनौती बन्दै गइरहेको कार्यक्रमका सभापति तथा प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले
- उमाशङ्कर द्विवेदी बाबा वासुकी नागले जरत्कारू ऋषिलाई भिक्षाको रूपमा आफ्नी बहिनीलाई दिएपछि ऋषिले विवाहको सम्बन्धमा गरेको पूर्वप्रतिज्ञा स्मरण गरेर वासुकी नागलाई भने,“मैले विवाह गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला मेरा केही सर्तहरू छन् । ती सर्तहरू पूरा भएपछि मात्रै म तपाईंकी बहिनीलाई स्वीकार गर्ने छु । पहिलो सर्तअनुसार म आफ्नै नाम भएकी कन्यासित मात्र विवाह गर्ने छु । दोस्रो सर्तअनुसार मैले विवाह गर्ने कन्याको भरणपोषण गर्ने छैन, तेस्रो सर्तअनुसार मैले विवाह गर्ने कन्याले मेरो लागि अप्रिय काम गरेमा म उसलाई तत्काल छाडी दिनेछु ।” नागराज ऋषिका अद्भूत सर्तहरू सुनेर दु:खी हुनुको साटो झन् खुशी भए । किनकि उनकी बहिनीको नाम पनि जरत्कारू नै थियो तथा बहिनीको आजन्म भरणपोषणको लागि उनी स्वयम् सक्षम थिए । बहिनीको बानीबेहोरा उनलाई थाहा नै थियो । बहिनी सोझी, शान्त स्वभावकी भएको हुनाले पतिको विरुद्ध अप्रिय काम गर्ने कुरा नै भएन । नागराजले ऋषिका जम्मै सर्तहरू स्वीकार गरे । नागराजकी बहिनी र जरत्कारू ऋषिको विधिपूर्वक विवाह सम्पन्न भयो । विवाहपछि जरत्कारू ऋषि वासुकी नागको भव्य महलमा निवास गर्न थाले । उनकी पत
‘सम्झना बिर्सना’मा राम कार्की
- सञ्जय साह ‘मित्र’ वीरगंज अनुर्वर होइन । मधेसको माटो मलिलो हुन्छ र देशको आर्थिक राजधानी वीरगंज सिर्जनाको क्षेत्रमा समेत मलिलो माटो साबित भएको छ । आख्यान पुरुषलाई जन्माउनेदेखि प्रेमा शाहजस्ता आख्यानकारलाई आँखा उघार्ने धर्तीको रूपमा वीरगंज परिचित छ । वीरगंजलाई बसोवासस्थल र कर्मक्षेत्र बनाउनेहरूले भाषा तथा साहित्यको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिएको गर्विलो इतिहास छँदैछ । वीरगंजेली साहित्यको वर्तमानले इतिहासको नयाँ गोरेटो आपैंmमा कोर्दै लगेको छ । नेपाली साहित्यमा ठोस योगदान दिने वीरगंजमा जन्मेर युवावयमा शिक्षा र रोजगारीको क्रममा अन्यत्र जाँदा पनि वातावरण पाएर कतिपय युवाले वीरगंजलाई चिनाउने कार्य गरेको देखिन्छ । यस्ता थोरै युवामध्ये एक हुन्, राम कार्की । विक्रमाब्द २०२८ मा पिता राजकुमार कार्की र माता जुनेदेवी कार्कीको कोखबाट वीरगंजमा जन्मेर हेटौंडामा जीवनवृत्ति गरिरहेका राम कार्की मकवानपुरे साहित्यमा परिचित बन्दै गएको नाम हो । जिल्लास्तरीय तथा अञ्चलस्तरीय प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कृत हुँदै विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा फुटकर रचना प्रकाशित गर्दै आएका कार्की सुस्केरा परिवार हेटौंडामा आबद्ध छन् ।
डा. शिवशङ्कर यादवको साहित्य सेवा
- चन्द्रकिशोर पेशाले चिकित्सक डा. शिवशड्ढर यादव साहित्यिक क्षेत्रका पनि परिचित नाम हुन् । उनी विगत चार दशकदेखि साहित्यमा सक्रिय छन् । उनको साहित्यिक उपनाम ‘विमलकृष्ण’ हो । उनले कविता, कथा र उपन्यास लेखनमार्फत् प्रसिद्धि कमाएका छन् । बारा जिल्लाको बहुअरी गाउँका मूल बासिन्दा डा. यादवको कर्मभूमि वीरगंज हो । चिकित्साशास्त्रमा अध्ययन प्राप्त उनको साहित्य अनुरागले अरूलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । उनको साहित्य सृजना मूलत: समाज केन्द्रित छ, आममानिसका अप्ठ्याराहरूलाई उनले उजागर गरेका छन् । गाउँलेका सपना र सङ्घर्षलाई उनले अभिव्यक्ति दिने जमर्को गरेका छन् । सरकारी सेवामा संलग्न रहेर पनि शोषित, पीडित जनताको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा उनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस कारणले पनि उनी पटकपटक सरकारी कोपभाजनका शिकार भएका छन् । यही नै उनको मौलिक विशेषता हो । डा. यादव आफ्नै आस्थामा हिंड्ने कलमजीवी हुन् । त्यसैले उनी हतपती कसैसँग सम्झौता गर्दैनन् । कसैसँग शिर ननिहुराउने आफ्नो बानीले गर्दा उनले महँगो मूल्य पनि चुकाएका छन् । तर पनि खलियानको खाँबो जस्तै उनी आफ्नै तालमा ठडिएका छन्, यो नै
मेरो आँखामा वीरगंज शहर
गाउँबाट ओइरिएका मानिसहरू, मार्केट भनिने केही अग्ला घरभित्रका बजारहरू, जताततै भत्किएका सडकहरू, जताततै फालिएका फोहोरले बनाएको दुर्गन्धित वातावरण, अस्तव्यस्त ट्राफिक, अव्यवस्थित पार्किङ र केही अव्वस्थित बजारबाहेक वीरगंजमा केही देखिन्न । सडकपेटीमा राखिएका फास्टफूड पसलहरू तथा मदिराका पसलहरूमा जम्मा भएका भीडहरूमा मेरो आँखा केन्द्रित भयो । दिउँसोदेखि नै मदिरासेवन गरी होहल्ला गर्दासमेत प्रहरी प्रशासनले कुनै वास्ता नगर्दा म अचम्भित हुन पुगे । बस स्टैन्डमा यात्रुलाई जबरजस्ती टिकट थमाउने प्रवृत्ति, भगवान्को नाममा कानको जालो फुट्ने गरी ध्वनि प्रदूषण गर्दा यहाँका नागरिकमा सचेतनाको निकै खाँचो रहेको मैले ठम्याएँ । व्यक्तिगत झगडाले बजारै बन्द गर्दै हिंड्ने युवा जमात र प्रहरीबीचको घम्साघम्सीले केहीबेर आतड्ढको वातावरण सृजना भएको मैले अनुभूति गरें । भिँmगा भन्किएका खाद्य सामग्रीहरू, माछामासु पसलमा फोहोरको वर्चस्व, खसी भनी बाख्राको मासु बेच्ने काला व्यापारीहरू तथा ग्यासका सिलिन्डरको सील बूढो मानिसको दाँत हले जस्तै हलिएको अनुगमन नदेख्दा म अचम्ममा परें । टाँगा, रिक्सा र टेम्पुमा बाल मजदुरले जोख
पात्रो र भित्तेपात्रो
–कुमार रुपाखेती नेपालमा वैशाखदेखि नयाँ वर्ष आरम्भ हुन्छ । फागुन र चैत महिनादेखि बिक्रीका लागि यहाँ पात्रो र भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर)को बाढी नै आउँछ । एकपटक खरिद गरेपछि वर्षभरि काम लाग्ने भएकोले मानिसहरू पात्रो वा भित्तेपात्रो किन्न रुचाउँछन् । औसत नेपालीहरूको घरघरमा एउटा पात्रो र क्यालेन्डर झुन्डिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । नेपालमा तोयनाथको पात्रो, सूर्यपात्रो (पञ्चा·) र बाबुरामको पात्रो सुप्रसिद्ध मानिन्छ । यी तीनजनाको पात्रो नेपालको ७५ जिल्लामैं पाइन्छ । भनिन्छ, पात्रोले संस्कृति र संस्कारसम्बन्धी दर्शन दिन्छ । यी तीनवटै पात्रोमा केही कुरा थपघट भएपनि आफ्नो ठाउँमा यिनीहरू ठीकै देखिन्छन् र नेपाली हिन्दूहरू यसमा विश्वाससमेत गर्दछन् । त्यसो त नरनाथ पात्रो पनि नेपालमा लोकप्रिय छ, अरूझैं यो जहाँतहीँ बिक्रीमा राखिंदैन । प्रत्येक पात्रोहरूले राजा वृहस्पति र मन्त्री शनि भन्दै २०७० सालको वार्षिक भविष्यबाट आरम्भ गर्दछन् । त्यसपछि मेषादि राशिको गोचर फल वर्णन गरिएको हुन्छ । आजकल पात्रोमा सरकारी, सार्वजनिक बिदा, दिवारात्रि मुर्हूत, वाणपञ्चक, बाखेला तथा प्रथम लग्न सारणी, आदि चक्र, दशमलग्
संविधानसभा निर्वाचन–‘भनिदिनेलाई सजिलो पुर्‍याउनेलाई गार्‍हो’
- बैद्यनाथ ठाकुर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपछि देशले निकास पायो भनेर खुशी हुनेहरू यतिबेला फेरि निन्याउरो मुख लगाउन थालेका छन् । सरकार बनेको आज १७ दिन भइसक्दा पनि चुनाव कहिले गराउने भन्नेबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको यथार्थता सबैको सामु छ । दलहरूले के खोजेका हुन्, त्यो पनि प्रस्टरूपमा बाहिर आउन सकेको छैन । सबैले मुखले मात्र निर्वाचन भनिरहेका छन् तर निर्वाचनको लागि गर्नुपर्ने गृहकार्यतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिंदैन । अवस्था यही रहने हो भने असारमा चुनाव हुन्छ नै भन्ने विश्वस्त आधार के त ? यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो । शीर्ष चार नेताहरूले गरेका सहमति नै राष्ट्रिय सहमति होइन । चार दलले गरेको सहमति अग्रगमन होइन, यो पश्चगमन हो । त्यसैले चैत १ गतेको सहमति सच्याउनुपर्दछ । चुनाव बहिष्कार गरी सडकमा ओर्लने दलहरू पनि दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । चुनाव दलहरूले लड्ने हुन् । दलहरूले जसरी अहिले मतदाता नामावली सड्ढलन कार्यमा अवरोध सृजना गरिरहेका छन्, यो क्रम यसरी नै जारी रहने हो भने कसरी चुनाव होला भन्ने आशड्ढा उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न
चुनावी सरकारका सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले सेवामा सुधार गर्न नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सुधारका लागि गर्नुपर्ने योजना तथा कामहरूको सूची १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । टेलिकमको सेवातर्फ मन्त्रीस्तरबाट चासो दिएको सम्भवत: यो पहिलो हो । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि टेलिकमको सेवा सामुदायिक विद्यालयको सेवा सरह बनेको छ । टेलिकमका कर्मचारीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को मानसिकतामा छन् । ग्राहकलाई छिटोछरितो, चुस्तदुरुस्त एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु र संस्था एवं उपभोक्ताको हितअनुकूल सोच्नुभन्दा पनि ‘समय कटाउने माना पचाउने’ ध्याउन्नमा उनीहरू देखिएका छन् । फाइबर केबुल जडान गर्नुभन्दा पहिले टेलिकमका कर्मचारीहरूका कारण उपभोक्ता वाक्क दिक्क थिए । लाइन गडबडी भएको महिना बितिसक्दा र पटकपटक गुनासो दर्ता गराउँदा पनि सेवा सुचारु गराउन टेलिकमका कर्मचारीहरू वास्ता गर्दैन्थे । त्यतिबेला टेलिफोन लाइनको तार चोरीका घटनाहरू धेरै हुने गरेको कारण ‘मरम्मत सम्भार गर्न प्राविधिक कर्मचारीले नभ्याएको हुनसक्छ’ भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । हाल फाइबर
फोहोर नउठाउँदा वीरगंज शहर दुर्गन्धित
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ नियमतिरूपमा वीरगंज उपमहानगरपालिकाले फोहर नउठाउँदा वीरगंजका विभिन्न ठाउँहरूमा फोहोरको ड·ुर थुप्रिएर शहर दुर्गन्धित बनेको छ । होलीले गर्दा बिहीवार पनि नगरपालिकाका सरसफाइ कर्मचारीहरू काममा नआएपछि शहरको फोहोर उठाउन नसकिएको नगरपालिकाका एक सरसफाइ कर्मचारीले बताए । माईस्थान मन्दिरअगाडि, श्रीपुर, बसपार्क, मुर्लीचोक, रानीघाट, त्रिमूर्तिचोक, तेजारथ टोललगायतका ठाउँमा फोहोर थुप्रिएर शहर दुर्गन्धित बन्नुका साथै कुरूप पनि देखिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक पनि सरसफाइ कर्मचारीहरू मनपरी ढ·ले काम गर्ने गरेकाले शहर दुर्गन्धित बनेको वीरगंजवासीको गुनासो छ । केही कर्मचारीहरू होली मनाउन घर गएकाले सरसफाइ हुन नसकेको तर शुक्रवारदेखि सरसफाइ सुचारु हुने एक महिला सरसफाइ कर्मचारीले बताइन् ।
अपहरणको विरोधमा सडकजाम र प्रदर्शन
प्रस, रौतहट, १५ चैत/ गाविस भेडियाहीका स्थानीय महिलाहरूले सडक अवरुद्ध गरी दोषी प्रहरीमाथि कारबाई गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत प्रहरी जवान झगुलाल यादवले भेडियाहीकी एक युवतीलाई आज साँझ करिब छ बजेको समयमा जबरजस्ती लगिरहेको आरोपमा महिलाहरूले सडक अवरुद्ध गरी कारबाईको माग गरेका हुन् । प्रहरी जवान यादवले एक युवतीलाई अपहरण गरी लगिरहेको अवस्थामा स्थानीयवासीहरूले पक्राउ गरी विरोध प्रदर्शन शुरू गरेका थिए । गौर– चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डलाई अवरुद्ध गरी विरोध जुलुस प्रदर्शन भएको थियो । खेतमा काम गरी घर फर्किरहेकी युवतीलाई प्रहरी जवान यादवले जबरजस्ती आफूसँग लग्न खोजेका स्थानीयवासीहरूको आरोप छ। घटनालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराम परियारको नेतृत्वमा प्रहरीहरू व्यापक परिचालन गरिएको थियो । घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी उपरीक्षक परियारले बताए ।
पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग (६)– सार्वभौम क्रेताहरू
- विश्वराज अधिकारी पूँजीवादको महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने पूँजीवाद अन्तर्गत क्रेता एवं उपभोक्ताहरूलाई बजारमा आफूलाई मन लागेको वस्तु खरिद गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ । क्रेताहरू सार्वभौम हुन्छन् । साम्यवादमा जस्तो केन्द्र वा सरकारले उपभोक्तालाई यो वस्तु खरिद गर्न पाइने, त्यो खरिद गर्न नपाइने भनी निर्देशित गरिएको हुँदैन । र यो विशेषताले गर्दा नै बजारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू बजारको कार्य (क्रेताहरूको माग) द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित हुन पुग्दछ । बजारमा ती सामग्रीहरूको मात्र उत्पादन, आपूर्ति एवं बिक्री हुन्छ जुन क्रेताहरूको माग (चाहना) अनुरूपको हुन्छ । क्रेताहरूले नचाहेका वस्तुहरूको न उत्पादन हुन्छ, न आपूर्ति नै । सरकारले त्यस किसिमको वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्न उत्पादक वा बिक्रेताहरूलाई कुनै पनि किसिमको करकापमा पार्ने काम गर्दैन र गर्न पाउँदैन पनि । पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा, क्रेताहरूको चाहनामा जुन किसिमले परिवर्तन हुन्छ, वस्तुहरूको स्वरूप, गुण, विशेषता आदिमा पनि सोही किसिमले परिवर्तन हुँदै जान्छ । यस कारण पूँजीवाद अँगालेका मुलुकका बजारहरू अति नै गतिशील हुन्छन् ।
कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता, ७ महिनामा ५ अर्बको चामल आयात
- शीतल महतो नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको झन्डै दुईतिहाई जनसङ्ख्याको प्रमुख पेशा कृषि हो । उनीहरूले जीवन निर्वाहका लागि मुख्यरूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्ने गर्छन् । तर मुलुकको कृषिजन्य उत्पादन उपभोगका लागि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकिराखेको छैन । जसकारण खाद्यान्न सड्ढट टार्न प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । खाद्यान्नका लागि विदेशबाट आयात गरिने चामलको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भन्ने नेपालको कृषि क्षेत्र कति परम्परागत र गैरव्यावसायिक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालीहरूको खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत रहेको चामलको बढ्दो आयातले नेपाली कृषि प्रणाली नै असफल भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । राज्यले किसानलाई व्यावसायिकरूपमा कृषिप्रति प्रोत्साहित गर्न नसक्दा वार्षिक अर्बौ रुपियाँ मूल्यको चामल आयात हुने गरेको छ । हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका किसानले धान–चामल निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्नुको सट्टा उल्टै चामलका लागि विदेशी किसानमाथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । बितेको सा
आर्थिक समानताको हक र गरिबसम्बन्धी प्रकाशित तथ्याङ्कहरूको भ्रम
- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव कानुनी राज्य स्थापनामा आर्थिक समानताको सिद्धान्तको धेरै योगदान हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख मर्म नै हरेक नागरिकको अधिकार समानरूपले संरक्षण गर्नु हो । सबैको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक हैसियत समान स्तरको बनाउनु हो । सबैको स्तर समान भयो भने मुलुकको विकास हुने मान्यता पहिलोपटक अमेरिकी संविधानबाट आएको हो । अमेरिकी संविधान जारी भएको झन्डै ८० वर्षपछि सन् १९६८ मा चौथो कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भयो । अशान्ति, विद्रोहको सम्भावना निमिट्यान्न हुन्छ । बेलायती विद्वान् ए.भी. डाइसका अनुसार समानताको हक प्रत्याभूत गर्न तीनवटा आधारभूत तत्त्वबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । पहिलो, कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्छस दोस्रो, राज्य संयन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले समानताको सिद्धान्तको कारण विशेष सुविधा पाउनुहुँदैनस तेस्रो, कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा उच्चपदस्थ अधिकारी पनि आम नागरिक सरह समान अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही समान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दोषी पाइएमा समान दण्डको भागी हुनुपर्छ । उपरोक्त सिद्धान्तले नागरिकबीच सामानता स्थापित गर्नुका साथै विधिको शासनमा ठूलो ऊ
गूड फ्राइडे: क्रूसको मृत्यु
परिचय: आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रूसमा झुन्ड्याई मृत्युदण्ड दिइएको दिन शुक्रवार परेको थियो । यो पवित्र सप्ताह अन्तर्गत ‘पास्कल ट्रिडम’ अथवा पवित्र तीन दिनभित्रको ईस्टर सन्डे अर्थात् प्रभु यीशुको पुनरुत्थान भएको आइतवारभन्दा अघिल्लो शुक्रवार हो । पास्कल ट्रिडमको गणना बिहीवार बेलुकीदेखि आइतवार बेलुकीसम्म गरिन्छ । त्यसभित्र पर्ने शुक्रवारलाई गुड फ्राइडे अर्थात् पवित्र शुक्रवार भनिने गरिएको हो । कसैलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनलाइ ‘राम्रो’ कसरी भन्न सकिन्छ ? प्रभु यीशुले पाउनुभएको मृत्युदण्ड अरू भन्दा धेरै किसिमले फरक थियो । संसारका धेरै देशमा अहिले पनि मृत्युदण्ड दिने नियम र प्रचलन छ । हाम्रो छिमेकी देशमा दुई आतड्ढवादीलाई मृत्युदण्ड दिइएको धेरै भएको छैन । मृत्युदण्ड प्राय: ठूलो र समाजको लागि खतरा बनिसकेका अपराधीलाई दिइन्छ । तर प्रभु यीशुले कुनै पनि अपराध गर्नुभएको थिएन । बरु उहाँले आफ्नो जीवनकालमा मानव जातिको सेवा गर्दै परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्नुभयो र अनगिनत रोगी–बिरामीलाई निको पार्नु भयो, यहाँसम्म कि समाजबाट अपहेलित कुष्ट रोगीहरू र वेश्यावृत्तिमा लागेकाहरूस
सङ्घीयता नै प्रमुख मुद्दा हुने
- श्रीमन्नारायण मिश्र एकपटक फेरि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको छ । आगामी चुनावको मिति घोषणा हुने औपचारिककता मात्रै छ । असार सात गते निर्वाचन हुने सम्भावना सार्‍है न्यून छ । चुनावपूर्व गठबन्धन अथवा मोर्चा बनाउने अभ्यास हुन थालेको छ । ठूला राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, मधेसवादी र जातीय स·ठनहरू पनि सानो वा बृहत् मोर्चा बनाउने अभियानमा लागिपरेका छन् । जहाँसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी मोर्चाको सवाल छ, त्यसको विश्वसनीयतामाथि धेरै कोणबाट प्रश्नचिह्न उठ्न सक्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यसको भूमिका सदैव अग्रणी र महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ, तर विगत केही वर्षदेखि यसको लोकप्रियतामा र्‍हास आएको छ, फलस्वरूप जनाधारमा पनि कमी आएको छ । वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट र मत प्रतिशत हासिल गरेको थियो । मत प्रतिशत तीन–चौथाईभन्दा बढी वा त्यसैको हाराहारीमा थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको तीस वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिस्टलाई राजकीय संरक्षण (गोप्य